people Nepal » तारे होटलको अकुपेन्सी कति ? तारे होटलको अकुपेन्सी कति ? – people Nepal
Posted on April 1, 2021 April 1, 2021 by Tara Nidhi
काठमाडौं, चैत्र १९। कोरोना कहरका कारण मारमा परेका तारे होटल अझै लयमा फर्कन सकेका छैनन् । लकडाउनका कारण पाँच महिना बन्द भएका तारे होटललाई लयमा फर्काउन होटल सञ्चालकले प्रयास गरे पनि सार्थक हुन सकेको छैन ।
यद्यपि, केही सुधारको संकेत देखिएको होटल सञ्चालकहरु बताउँछन् । अहिले तारे होटलको अकुपेन्सी दर (होटलका कुल कोठामध्ये भरिएका कोठा) १२ देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र छ ।
तथ्यांकअनुसार साङ्ग्रिला होटलको अकुपेन्सी दर १२ देखि १८ प्रतिशत रहेको छ । होटलका सेल्स एण्ड मार्केटिङ डाइरेक्टर साङ्गे लामाका अनुसार कोरोनाका कारण साङ्ग्रिला होटल बन्द भएन । उक्त होटल लकडाउनका बेला पनि क्वारेन्टिनका रुपमा सञ्चालित थियो । सो समयमा साङ्ग्रिलामा २ सय ५० जना बसेका थिए । जसकारण होटल संचालनमा केही राहत मिलेको लामाको भनाइ छ ।
अहिले पनि सांग्रिलामा पहिलाकै ग्राहक आउने गरेका छन् । यहाँ नेपालीभन्दा भारतीय ग्राहक धेरै आउँछन् । व्यापारबाट होटलको सबै खर्च नपुगे पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति नआएको लामाले बताए ।
कालिमाटीस्थित पाँचतारे होटल सोल्टीमा २२६ कोठा छन्, जहाँ अचेल दैनिक १२० कोठा प्याक हुन्छन् । सोल्टीमा विभिन्न कर्पोरेट हाउसका कार्यक्रम पनि हुने गरेको छ । जसकारण विदेशी पाहुना नआउँदा पनि व्यापार ठिकै भएको बताउँछन्, होटलका सेल्स म्यानेजर रविन रानाभाट ।
होटलमा नेपाली पाहुना कम आए पनि विभिन्न नेपाली इभेन्ट हुने गरेको रानाभाटले बताए । उनका अनुसार सोल्टीमा आउने अधिकांश पर्यटक भारतीय हुन् । ‘समग्रमा व्यापारबाट होटल सञ्चालन गर्न पुगेको छ’ उनले भने, ‘अहिले नाफा कमाउने कुरा छैन, चल्न सके नै ठूलो कुरा हो ।
सोल्टीले सामाजिक दूरीलगायत सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर होटल संचालन गरेको छ । ‘बाहिरबाट आउने ग्राहकलाई पीसीआर टेष्ट नगरी होटलमा प्रवेश नदिने भएकाले यहाँ आउने पर्यटक वा कुनै पनि ग्राहकमा कोरोना संक्रमणको सम्भावना कम छ’, रानाभाट भन्छन् ।
लाजिमपाटस्थित होटल र्‍याडिसनले लकडाउनपछि पहिलाको भन्दा कम मूल्यमा आफ्ना सीमित ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ । र्‍याडिसनमा अहिले १० देखि २० प्रतिशत अकुपेन्सी छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलले सरकारले जारी गरेको ‘दोस्रो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड’ पालना गर्दै बुक भएका इभेण्टसमेत रद्द गरेको छ । उक्त होटलले लकडाउनपछि पहिलाको भन्दा ५० प्रतिशत सस्तोमा सेवा दिइरहेको थियो । अहिले होटलको अकुपेन्सी दर अहिले ५ देखि १० प्रतिशत रहेको छ । होटलमा भारतीय ग्राहक नै धेरै हुने रहेको होटलले जनाएको छ ।
काठमाडौंको बौद्धमा रहेको हायात रिजेन्सी होटलमा अहिले विदेशी र नेपालीको सामान्य चहल पहल छ । होटलमा भारतीय पर्यटक भने कम भएको होटलको सेल्स डिपार्टमेन्टले जानकारी दिएको छ ।
अहिले होटलको अकुपेन्सी दर अत्यन्त न्यून रहेको होटलकी सेल्स तथा मार्केटिङ म्यानेजर निमा शेर्पाले बताइन् । उनका अनुसार होटलको अकुपेन्सी दर १० प्रतिशत मात्र रहेको छ । ‘होटल नखोल्दा पनि भएन, खुल्दा पनि अबस्था अत्यन्त नाजुक छ,’ उनले भनिन् ।
अर्को पाँचतारे होटल याक एण्ड यतिमा अहिले ग्राहकको संख्या न्यून छ । विवाहलगायत विभिन्न कार्यक्रमले सञ्चालन खर्च अलिकति धानेको होटलले बताएको छ । होटलमा अहिले अकुपेन्सी दर १० प्रतिशत मात्र रहेको छ । ‘होटलका रुमहरु धेरैजसो खाली नै छन्,’ होटलकी एक कर्मचारीले बताइन् ।
काठमाडौंमै रहेको अलफ्ट होटलको अकुपेन्सी दर अन्य पाँचतारे होटलको तुलनामा राम्रो रहेको छ । होटलका अनुसार अकुपेन्सी दर सरदर ३५ प्रतिशत रहेको छ । बुधबार मात्र होटलको अकुपेन्सी दर ३० प्रतिशत रहेको थियो । अलफ्टमा प्रायः तेस्रो मुलुक तथा भारतका ग्राहक आउने गरेका छन् ।
दरबारमार्गस्थित अर्को पाँचतारे होटल अन्नपूर्ण भने कोरोना महामारीका कारण अहिले पनि बन्द नै छ ।
मापदण्ड खुकुलो बनाएपछि आशा
केही समयअघि मात्र सरकारले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विदेशी पर्यटक आगमनलाई केही खुकुलो बनाएसँगै होटल व्यवसायी केही उत्साही भएका छन् ।
‘विदेशी पर्यटकलाई नेपाल आउन खुकुलो बनाएसँग हामीमा उत्साह बढेको छ’, ‘होटल एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाह भन्छन्, ‘कोरोनाबीचमा पनि सबै सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पर्यटक ल्याउने बाटो खुलेको छ ।’
हाम्रा एजेन्टमार्फत विदेशी पर्यटक ल्याउने काम सुरु गरिएको उनले बताए ।
सौराहा र पोखराका होटल सुधारको बाटोमा
चितवन सौराहाका ठूला होटलको स्थिति सन्तोषजनक भएको बताउँछन्, ग्रीन पार्क चितवन होटलका म्यानेजर राधाकृष्ण श्रेष्ठ । उनका अनुसार ग्रीन पार्क होटलको अकुपेन्सी दर अहिले ४० प्रतिशत छ । ग्रीन पार्कमा अधिकांश आन्तरिक पर्यटक जाने गरेका छन् ।
सौराहामा विगतका वर्षभन्दा यसवर्ष आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढी रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । सौराहका स्टार होटलहरुको अकुपेन्सी दर ४० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको उनी बताउँछन् ।
पोखरामा पनि होटल व्यवसायले लय समात्न थालेको बताउँछन् होटल माउण्टभ्यू पोखराका होटल म्यानेजर कृष्ण भारती । उनका अनुसार अहिले माउण्टभ्यूको अकुपेन्सी दर ४० प्रतिशत छ ।
अहिले पोखरामा विदेशी पर्यटक पनि बढ्न थालेको भारती बताउँछन् । उनका अनुसार कुल पर्यटकमध्ये पाँच प्रतिशत विदेशी पोखरामा छन् ।